Madaxweynaha Puntland oo soo saaray liiska musharixiinta oo u tartamaya aqalka sare ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo soo saaray liiska musharixiinta oo u tartamaya aqalka sare ee Soomaaliya
August 10, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray liiska 22 musharax oo u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada subaxnimadii Talaadada.
Intooda badan musharixiinta oo ay ku jiraan masuuliyiin xilal hadda ka haya Puntland ayaa ah kuwo cusub marka laga reebo Cabdiraxmaan Faroole iyo Farxaan Cali Xuseen oo horey u joogay aqalka sare.
Saddex kursi ayaa lix haween ah ay ku tartamayaan taasoo ka dhigi doonta in 11-ka xubnood oo Puntland aqalka sare ee Soomaaliya ay ku leedahaya ay saddex haween noqon doonaan.
Hoos ka akhriso liiska xubanaha.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada lagu soo xulayo xildhibaanada qabiilooyinka Banaadiriga iyo Somaliland umatali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ka bilaabmatay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Doorashada aqalka hoose ayaa ka bilaabmatay [...]